Burma Strange News (Burmese Version): ထူးဆန်းသော ပို့စ်မော်ဒန် အကသင်တန်းကြီး
ဗီဒီယိုကို Human Rights Myanmar က ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ထူးဆန်းသော ကပွဲ သဘင်ကြီး ပါဝင်သည့် ပို့စ်မော်ဒန် အကသင်တန်းကြီး တခုကို တမူထူးခြားစွာ ဖွင်လှစ်သင်ကြား၊ ဆင်ယင် ကျင်းပခဲ့သည်။ သင်တန်းပို့ချသူ၏ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း စင်အောက်က အဖိုးကြီး အဖွားကြီးများပါ ထူးဆန်းစွာ ကခုန်ကြသည်။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ရာစုနှစ်များစွာ အတွင်း အထူးဆန်းဆုံး ပို့စ်မော်ဒန် ကပွဲကြီးဟု ပြောစမှတ်ပြုကြ၏။
"စစ်မှန်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်၊ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအပေါ် သစ္စာ စောင့်သိ ရိုသေတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ တိုင်းတပါးကို အထင်ကြီးသော မှီခိုအားထားလိုသော စိတ်ဓာတ်များ ကင်းဝေးပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှု၊ မိမိတို့၏ ပြည်တွင်းအားကို ယုံကြည်မှု၊ ... နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်လိုမှု စတဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကို နိုင်ငံသားတိုင်းက ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့" အတွက်လည်းကောင်း
"ဘာသာတရားကို ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းပြီး စိတ်ဓာတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ မိမိလူမျိုးရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ ဓလေ့ စရိုက်ကို ဂုဏ်ယူနိုင်ကြဖို့" အတွက်လည်းကောင်း အကသင်တန်းကြီးကို ဖွင့်လှစ်ရကြောင်း စစ်အစိုးရ တပ်မမှူးများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်သည့် အဆိုပါ ထူးဆန်းသော ပို့စ်မော်ဒန် အကသင်တန်းကြီး နှင့် ပို့စ်မော်ဒန် "မရက်ပ်တရက်ပ် မဟစ်ဟော့တဟော့ ကပွဲကြီး" ဖွင့်ပွဲ မိန့်ခွန်းတွင် တွေ့ရသည်။
စစ်အစိုးရသည် ယခင်က မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်စေရန် ဆိုကရေးတီး အကပြိုင်ပွဲများဖြင့် အခြောက်များကို မင်းသားအက ကစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအခါတွင် ပြည်သူများအား ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းစေရန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ပို့စ်မော်ဒန် အကများကို ကခုန်စေကြောင်း တွေ့ရသည်။
ဒီ BS News သတင်းကို မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်းကလည်း ကိုးကား ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by BS News at 12:52 AM
Anonymous January 15, 2011 at 1:39 AM
အဲဒါဘုန်းကြီးလား ..... တလွဲတွေတော့ ဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘီး(ခေါင်းဖီးတဲ့ဘီး) လိုဖြစ်နေပြီ။ သီချင်းနဲ့ ဘုန်းကြီးဘာပါတ်သက်လဲ မသိဘူးနော်။
metalman January 15, 2011 at 2:26 AM
တင်မိုးလွင်တို့တော့ ထမင်းငတ်ကုန်တော့မှာပဲ ဟီဟီ
Anonymous January 15, 2011 at 3:00 AM
Don`t you know yet??
That`s called "Day Club"
Anonymous January 15, 2011 at 4:56 AM
ဂျာနယ်လစ် January 15, 2011 at 9:03 AM
ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ ကိုဇီးရေ.... လုပ်ကြပါအုံးးး
ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်မှ ကိုးကွယ်မဲ့သူ ပေါမှာတဲ့လားနော် ..
လိုက်လုပ်တဲ့ အောက်က လူဂျီးတွေကိုလဲ အံသြတယ် ...
ကောင်းပါတယ် .. ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးဆိုတာ ဒါကို ပြောတာထင်တယ် ..
ကိုးပါသီလ ကိုပြန်သင်ပေးရမလို ဖြစ်နေပါလားးးးးး
မဲနဲ့ နီပါါးအတူထား နီပါးမဲစော်နံတဲ့။ ယခုလဲ အရူးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အရူးစင်ပေါ်တက်ကနေတာ မဆန်းပါဘူးဗျာ...ဟင်း...ဟင်း...ဟင်း.....အောက်ကလူတွေကလဲ အရူးတွေချည်းပါပဲ.....ဟဲ...ဟဲ...ဟွတ်...
ရွာသား January 15, 2011 at 10:02 AM
ဟ ... ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ ...
Aero January 15, 2011 at 12:56 PM
အား ပါး ပါး ပါး ပါးးးး...ရိုက်ချက်ကလန်ထွက်လယ် ဝေး ၀လို့တောင်လိုက်မမီတော့ဘူး။ ဘီလိုတွေဖစ်ကုန်လာလဲ။
sociology ဆိုတာကို ဘယ်လိုများနားလည်ထားလို့ ဒီလိုတွေလုပ်ရတာလဲ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး ဘ၀မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းလို့
နာမည်တပ်ရင် လုံလောက်ပါပြီ စတန့်အထွင်မလွန် စေချင်ပါ။
ဘုန်းဘုန်းဘုရား sociology ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို Wikipedia မှာ ဒကာ ဒကာမများကို အစဉ်သနားခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ရှာဖွေဖတ်ရှုတော်မှုပါ။
Aero January 15, 2011 at 1:00 PM
ဆရာဇီးကွက် တို့လဲ ဒါမျိုးကို အတုယူသင့်ပါတယ်။
ခုခေတ် မှာလှေကြီးထိုး ရိုးရိုးကြီး လုပ်နေလို့မရတော့ဘူးလေ။
Zam January 15, 2011 at 4:09 PM
r we ready for democracy?
လေပြေအေး January 15, 2011 at 9:25 PM
Anonymous January 15, 2011 at 11:59 PM
အဲလိုလိုက်မကရင် မကတဲ့သူကအရှုး တဲ့ မိုးခါးရေ သောက်ကုန်ကြလေပြီ ကရအောင်လား
this dance is nothing, next dance will be strip( without clothes ) dance, hello phone gyi are you agree , we are ready to see .....
"မရက်တရက်ပ် မဟစ်ဟော့တဟော့ ကပွဲကြီး" ..ခေါင်းစဉ်ပေးကောင်းပါပေ့..
ထေရ၀ါဒကို တရားဝင် စော်ကားဖျက်စီးခြင်း..
အဆိပ်တွေ ထုတ်ဖို့ ကကြကကြ .. ဟားဟားဟား ..
ဘာတဲ့ .. ၁၅ မိနစ်အတွင်း စိတ်ပင်ပန်းမှု လျှော့ချနည်းတဲ့ .. အားအမြန် ပြန်သွင်းနည်းတဲ့ .. ဟားဟား .. ဘက်ထရီ အားသွင်းတာလား အောင့်မေ့မိတယ် .. နောက်ဆို တရုတ်သိုင်းကားထဲကလို အတွင်းအားသွင်းတာတွေပါ သင်ပေးမယ်ထင်တယ်။ စကားမစပ် .. အဲ့ဒီ ၀ဘ်ဆိုဒ် http://numberonesociology.com/index.htm ဆိုတာ ဖွင့်မရတော့ဘူးကော .. bandwidth limit over ဆိုတဲ့ error တက်နေတယ် .. အဲ့ဆိုဒ်ကို မဟက်ကြပါနဲ့ သူများတွေ သိချင်သူတွေ ကြည့်ရအောင် ထားပေးပါ။ ဒါမှ ကောင်းလား မကောင်းလား သိရမှာပေါ့ ..